स्वास्थ्य साबधानीमा सजग बनौं - News Today
बातावरणमा प्रदूषण फैलिएका कारण सरकारले यति बेला चार दिनसम्म शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरेको छ । वायुमण्डलमा धूलो र धुवाँको मात्रा अत्यधिक बढेका कारण बाहिर निस्कन स्वास्थ्यकालागि घातक हुने महशुस गरेर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
वायुमण्डलमा बढेको प्रदूषणका कारणले आँखा पोल्ने, सास फेर्न समस्या हुने, घाँटीमा खसखस बढ्ने जस्ता समस्या बढ्न थालेका छन् । यस्तो बेलामा अरुले दिएको आदेश पालनामा मात्र भन्दा पनि आफैं आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सजग रहनु उत्तम हो । हावा प्रदूषित भएपछि अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्या आउनु स्वाभाविकै हो । त्यस कारणले पनि यस्तो समयमा घरमै बस्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त हो । विना काम घरबाहिर ननिस्कने यदि निस्कनै परेमा पनि मास्क लगाएर मात्र निस्कने स्वास्थ्य सम्बन्धि सजगता हुन् । यसका साथै बातावरणमा प्रदूषण बढ्न नपाओस् भन्नाकालागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नु पर्ने समय पनि यति बेला नै हो ।
खास गरी धूलो धुवाँ बढ्न नपाओस् भन्ने धेयले त्यस्ता गतिबिधि नगरेमा प्रदूषण बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ । खुला हावामा घुमफिर गर्ने धेरैको चाहना हुन सक्छ । तर हामीले सास लिने वायु नै यदि दूषित बनेको छ भने यस्तो बातावरणमा गरेको घुमफिरले त स्वास्थ्यमा फाईदा भन्दा पनि गम्भीर प्रकारको रोग निम्त्याउन सक्दछ । हामीले उपभोग गर्ने वायु प्रदूषित बन्न थाल्छ यदि भने कहाँ गएर स्वच्छ हावा लिन सकिएला ? त्यस कारणले पनि बातावरण विगार्न होईन स्वच्छता कायम गर्ने गराउनेतिर लाग्नु पर्ने यति बेलाको आवश्यकता बनेको छ ।
उसै पनि यति बेला कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा विना कामको घुमफिर उसै पनि खतरायुक्त हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट पनि संक्रमण नियन्त्रणकालागि अनावश्यक घुमफिरमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ । यति बेला बढेको प्रदूषण नियन्त्रणकालागि सरकारी स्तरबाट गरिने कामको मात्र भर परेर काम चल्ला भन्न सकिन्न । यसकालागि जनस्तरबाट पनि सहयोग जुटाउन सकियो भने अहिलेको असहजता बिस्तारै घटेर जानेछ ।
बातावरण बिगार्ने काम मानवबाट नै भएको हो । बिग्रँदो बातावरणलाई दृष्टिगत गरी विश्वस्तरमै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यसकालागि सबैको सहयोग तथा सहकार्य अपेक्षित छ ।
Previous : राजविराज नगरपालिकाले भाग्न सघायो कि…?
Next : रेशम चौधरी रिहाई राष्ट्रिय जागरण घोषणा सभाको तयारी पूरा